Indawo entle yomlambo waseBurnham-iimbono ezintle!
Iflethi yethu inikezela ngemibono emihle yoMlambo iCrouch - phakathi kwezona zibalaseleyo eBurnham, sicinga. (Le mifanekiso yomlambo yathathwa yonke kwiflethi!)
Ukuba uza apha ukuzohamba ngesikhephe, ukuhamba iimayile zethu eludongeni lwaselwandle nakwiindledlana zomlambo, ukuya kwiwotshi yeentaka, okanye ukubaleka nje kuyo yonke loo nto, sicinga ukuba uya kuvuya.
Ibekwe kwibhloko ejongeka kakuhle emva kweminyaka yee-1960s iimitha ezingama-25 ukusuka emlanjeni, iflethi iye yalungiswa ngothando yaya kumgangatho ophezulu kakhulu, inebhoyila yerhasi yale mihla yamanzi ashushu kunye nokufudumeza okuphakathi.
Ngomgangatho onomtsalane we-ceramic yase-Italiyane nangona kunjalo, iflethi iye yahlaziywa ngokunambitheka kwaye yanikwa ubuncinci be-clutter ukugcina ugxininiso kumbono omangalisayo.
I-airy, indawo yokuphumla ephindwe kabini inika iimbono ezingaphazamisekiyo zoMlambo i-Crouch oguquguqukayo-indawo ethandwayo yabakhenkethi beenqanawa ngaphezu kwekhulu leminyaka. Ukusuka apho, unokujonga ngaphesheya uye kwindawo enkulu yokugcina izilwanyana zasendle kwelinye ibhanki elichaseneyo, nangaphaya kweSouthend kunye nechweba leThames. (Ngosuku olucacileyo, unokubona yonke indlela eya e-Kent-zive ukhululekile ukuthatha ithuba leebhayinotyhulasi zethu zakudala!)
Omabini amagumbi okulala * aneebhedi ezitofotofo ezilingana nokumkani, kunye neewodrophu ezinendawo eninzi yokuxhoma, ngelixa ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo linombono walo womlambo-ukuhlamba akuzange kube ngumsebenzi ongaphantsi! Izixhobo ziquka umpheki omtsha wombane, ifriji, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wekofu weKrups espresso kunye nemicrowave, kunye neketile kunye nethosta.
Igumbi lokuhlambela libonelela ngendlu yangasese, isitya sokuhlambela kunye neshawari entsha elungelelaniswe ngesisa enamanzi amaninzi ashushu kwitephu. Umatshini wokuhlamba ubekwe ekhabhathini kwelinye lamagumbi okulala.
*Sicebisa ukuba iflethi ifaneleke kakhulu kubantu ababini, nangona inamagumbi amabini okulala, inokwamkela izibini ezimbini ngepinch.
Le flethi iyinxalenye yophuhliso lwabucala olulondolozwe ngokukhaliphileyo olunezitiya ezigcinwe kakuhle, indawo yokupaka yasimahla- nkqu nepaki yayo yedinghy (isithuba sixhomekeke ekufumanekeni).
Ukuhamba umzuzu empuma ecaleni kodonga lolwandle yindawo eyaziwayo yobugcisa yaseRoyal Corinthian Yacht Club, ngelixa umgama ofanayo kwelinye icala uya kufumana iRoyal Burnham Yacht Club. Amanyathelo ambalwa ayakuthatha akusa eBurnham Quay kunye nendawo enomtsalane, iziko ledolophu elinomtsalane kunye newotshi yayo yewotshi yeVictorian, ii-pubs, iivenkile zekofu ezigqwesileyo, i-gastro-pubs kunye neendawo zokutyela zaseTaliyane, zaseThai, zaseTshayina naseIndiya.
(Sicebisa ngokukodwa iVenkile yeKofu eGround kwiSitalato esiPhezulu - bade bazise! Bona iimenyu eflethini.)
UMtsalane KUNYE NEZINTO EKUFUNEKA UZENZE
IBurnham kunye nendawo eyingqongileyo inezinto ezininzi ezinomtsalane ezidumileyo:
* Malunga nomgama weemayile, kwelinye icala ledolophu, uya kufumana iMangapps Railway Museum.
*Umgama omde ngaphandle, eCreeksea, iParlor Cafe yivenkile yekofu kwifama enekhosi yayo yeDisc Golf, kunye nendawo yokuzivocavoca kunye ne-spa.
*Ngaphesheya komlambo (iyafikeleleka ngesikhephe, esisuka rhoqo kwijethi yiWhite Harte Hotel, imizuzu embalwa ecaleni kodonga lolwandle ukusuka kwiflethi yiLion Creek kunye neLower Raypits Nature Reserve,
ICanewdon, indawo enkulu yokugcina iihektare ezingama-65, yi-Essex Wildlife Trust.
* Malunga neekhilomitha ezili-10 kude yiBradwell, ibonelela ngeendlela ezintle zokuhamba ngaselwandle kunye neSt Peter's Chapel, enye yeecawe ezindala kakhulu zaseBritane!
* UMaldon, umgama oziikhilomitha ezili-12, unembali yaseHythe Quay-ikhaya leenqanawa ezidumileyo nezintle zaseThames (iihambo zokuqhafaza ziyafumaneka) kunye nePromenade Park enomtsalane.
*Omnye umtsalane walapha ekhaya yiStow Maries Aerodrome, ibala leenqwelomoya elibuyiselweyo leMfazwe yeHlabathi yokuQala, apho abaqhubi beenqwelomoya bakhe babhabha besiya kunqanda i-maurauding Zeppelins.
* Ukuqhubela phambili, igadi edumileyo yeHyde Hall ye-RHS yimecca kubathandi bazo zonke izinto ezijolise egadini, ngelixa i-40 yemizuzu yokuqhuba ikusa e-Southend, apho uhamba umgama oziikhilomitha ezi-1.3 ukuya kumlambo iThames ecaleni kwepier eyaziwayo emhlabeni. unyango.
Iwebhusayithi yeBhunga leDolophu yaseBurnham inecandelo elibalaseleyo nelibanzi eligubungela umtsalane kunye nezibonelelo zeendwendwe, kunye namakhonkco kuzo zonke iiwebhusayithi ezifanelekileyo.
Google "Burnham Town Council" ukuyifumana.
Ndihlala kumgama oziikhilomitha kwaye ndingaqhagamshelwa xa kukho nayiphi na imibuzo okanye iingxaki. Ndikhe ndiphume edolophini ngeempelaveki, kodwa kusoloko kukho umntu okufutshane endinokumtsalela umnxeba ukuze andincede ngazo naziphi na iingxaki.
Ndihlala kumgama oziikhilomitha kwaye ndingaqhagamshelwa xa kukho nayiphi na imibuzo okanye iingxaki. Ndikhe ndiphume edolophini ngeempelaveki, kodwa kusoloko kukho umntu okufutsha…